Kismaayo: Qarax ka dhacay Xafiiska arimaha Bulshadda (Dhegayso) – Radio Daljir
Nofeembar 25, 2012 2:42 b 0
Kismaayo Axad Nov 25 12, Qaraxa oo noociisa la sheegay inuu ahaa kuwa meelaha fog laga hago ee loo yaqaano Remote Control ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubadda Hoose.
Waxaa loo badinayaa Qaraxani inuu ahaa mid xili hore la qorsheeyey oo lagu duugey goobtaasi qaraxu ka dhacay.
Macalin Xaashi Cabdiraxmaan Ibraahim oo ah madaxa Samafalka ee Maamulka KMG ah ee magaalada Kismaayo oo ku sugnaa goobta Qaraxu ka dhacay oo ah Xafiiska Arimaha Bulshada ee Kismaayo ayaa Radio Daljir u sheegay in Qaraxaasi uu ku dhaawacmay hal qof oo rayid ah.
Wuxuu tilmaamay in qaraxaasi markuu dhacay goobta ay ku sugnaayeen dad rayid ah iyo shaqaalaha Xafiiska arimaha Bulshada ee gobolka Jubbadda Hoose.
Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubadda Hoose oo xiligan uu ka arimiyo maamul KMG ah oo dhowaan loo sameeyey ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca Iskuday lagu doonayo in amaanka lagu Khalkhaliyo kuwaasoo maamulku sheegay intooda badan inay ka hortagaan.